Horey u dalbato Fitbit Versa 2 cusub oo hel 25 $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo »Hore uga dalbo Fitbit-ka cusub ee loo yaqaan 'Fitbit Versa 2' kuna hel 25 $ - BGR
Horey u dalbato Fitbit-ka cusub ee loo yaqaan 'Fitbit Versa 2' oo aad hesho 25 $ - BGR
Apple Watch ayaa laga yaabaa inay tahay saacadda ugu caansan smart, laakiin waa ka fog tahay ciyaarta kaliya ee magaalada. Fitalka loo yaqaan 'Fitbit Versa' aad ayuu caan u ahaa tan iyo markii la sii daayay. Moodeel jiil cusub ayaa ah in la bilaabo isbuuca soo socda! The smart smart smart cusub Fitbit Versa 2 Caafimaadka & Jimicsiga waxaa ku jira astaamaha sida kormeerka garaaca wadnaha, raadraaca hurdada, adkaynta iyo xitaa taageerada Amazon Alexa. Waxaa la sii deyn doonaa Axadda 15 Sebtember, laakiin haddii aad hadda ka dalbatid Amazon, waxaad heli doontaa 25 $!
Waa tan qaadada laga soo qaatay bogga wax soo saarka:
U adeegso Amazon Alexa isku-dhafan si aad u hesho macluumaad dhakhso ah. iyo macluumaadka, hubi cimilada, jadwalka saacadaha iyo qaylo-dhaanta, xakamee aaladdaada caqliga leh iyo waxyaabo badan oo mahad leh codka codkaaga (codsi dhinac saddexaad ah ayaa laga yaabaa in loo baahdo, Amazon Alexa lama heli karo dhammaan waddamada oo dhan)
Iyada oo ku saleysan hurdada wadnahaaga, hurdada iyo xasilloonida, Hurdada Hurdada waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u fahamto tayada hurdadaada habeen kasta. Sidoo kale raac waqtigaaga iftiinka, marxaladaha hurdo qoto dheer iyo qoto dheer oo hel macluumaad shaqsiyeed.
Xakamee barnaamijkaaga 'Spotify', soo degso xarumaha Pandora, kuna dar liistada liiska Deezer. Kaydso oo ku ciyaar heeso badan oo ah 300 gacantaada (gacanta ayaa loo baahan yahay, Pandora waxaa lagu keydiyey Mareykanka)
Iyada oo leh shaashad weyn iyo ikhtiyaar firfircoon markasta, macluumaadkaaga ayaa had iyo jeer gacantaada ku jira (muuqaalka joogtada ahi wuxuu ubaahan yahay in lagu soo xeroodo marar badan)
Raadso heerka garaaca wadnahaaga ee '24 / 7', maahan, masaafada, kaloriyada gubtay, waxqabadka saacadlaha ah, daqiiqadaha waxqabadka, iyo sagxadaha dhajinta
Wuxuu si joogto ah ugu shaqeeyaa madax-bannaanida in kabadan maalmo 5 (waxay ku kala duwan yihiin adeegsiga iyo qodobo kale)
Hel ogeysiisyo ku saabsan wicitaanada, qoraalka, jadwalka, iyo barnaamijyada casriga ah marka taleefankaagu dhow yahay. Intaa waxaa sii dheer, u soo dir jawaabo deg deg ah iyo jawaabaha codka ee Android kaliya
Waa kuwan shuruudaha guud ee deeqaha:
Tani waa waqti xaddidan.
Bandhigani wuxuu khuseeyaa oo keliya alaabada ay iibisay Amazon.com. Badeecadaha ay iibiyaan kuwa saddexaad iibiya ama hay'adaha kale ee Amazon xaq uma yeelan doonaan deeqdaas, xitaa haddii ay "ka buuxaan Amazon.com" ama "Xaq u Yeelashada Bilaashka ah".
Soo bandhiggu ma quseeyo waxa ku jira dhijitaalka.
Bandhigga ayaa shaqeynaya illaa iyo inta
Kharashaadka dhoofinta iyo canshuuraha ayaa lagu dabaqi karaa qiimaha guud ee alaabada xayeysiinta iyo lacag dhimista.
Alaabada waa in lagu iibsadaa hal amar isla markaana lagu xareeyaa isla xawaaraha isla cinwaanka.
Soo bandhigid xaddidan by macaamiisha iyo koontada.
Bandhigan laguma dari karo wax dalab kale ah.
Waxaad ka heli doontaa e-mayl cinwaanka Amazon ee sheegaya lacagta doollar ee koodhka xayeysiinta. Emaylka ayaa waliba muujin doona sida loo isticmaalo koodhka xayeysiinta.
Koodhka xayeysiinta ahi wuxuu dhacayaa 23h59. (PT) 30 Oktoobar 2019
Koodhka xayeysiinta ayaa lagu dabaqaa oo keliya Amazon.com
Waxaad ka heli doontaa e-mayl cinwaanka Amazon ee sheegaya lacagta doollar ee sumcadda xayeysiinta isla markaana muujineysa in lacagta doollar ee sumcadda lagu daray koontada macaamiishaada. Emaylka ayaa waliba muujinaya sida loo isticmaalo amaahda xayeysiinta.
Amazon waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho ama joojiso dalabku wakhti kasta.
Deeqdu waa mid aan la wareejin karin lagumana wareejin karo.
Keenista dalabku waxaa loo qaybinayaa si saami ah dhammaan waxyaabaha dalacsiinta ee dalabkaaga.
Haddii mid ka mid ah alaabada ama waxyaabaha la xiriira soojeedintan la soo celiyo, soo celintaadu waxay la mid noqon doontaa cadadka aad ku bixisay badeecada ama waxa ku jira, iyadoo la tixraacayo siyaasadaha dib-u-celinta ee lagu dabaqi karo. .
Haddii aadan u hoggaansan shuruudahan mid ka mid ah, dalabkaasi wuxuu noqonayaa mid aan ansax ahayn.
Ilaa Kaarka Hadiyadda ah ee Amazon uu yahay faa'iidada la sheegay ee dhiirrigelinta, koodhyada xayeysiinta ah (oo ay ku jiraan kuwa toos loogu shubay xisaabaadka) dib looma soo celin karo Amazon. Gift Cards.
Beddelka logitech ee Apple Pencil 2 ee 130 $ hadda waa 49,99 $ - BGR
7 ayaa bixisay codsiyada iPhone ee iibka bilaashka ah 11 September - BGR